Odoyaasha Dhaqanka Muqdisho oo Xalay ka kulmay Mustaqbalka G.Banaadir. | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Odoyaasha Dhaqanka Muqdisho oo Xalay ka kulmay Mustaqbalka G.Banaadir.
Odoyaasha Dhaqanka Muqdisho oo Xalay ka kulmay Mustaqbalka G.Banaadir.
January 20, 2018	57 Views
Odoyaashaan ayaa kulankooda waxa ay diiradda ku saarayeen Qodobo ay kamid yihiin, Go’aankii Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Maxamed Farmaajo ee uu ku joojiyo in aanan la bixin karin, lana iibin karin dhulka danta guud ah iyo Shirka Dhalinyarada qaran ee Gobolka Banaadir.
Warsaxaafadeed ay soo saareen ayee odoyaasha dhaqanka ku dalbadeen in aanan la hor istaagin shirka uu hormuudka ka yahay Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho ee looga arrinsanayo Aayaha Gobolka.
Si gaar ah waxa ay Madaxda Dowladda ugu dalbadeen in ay garab istaagaan Shirka, halkii ay hor istaagi lahaayeen, Maadaama ay sheegayaan in Shirka uu rajo galinayo Nabad galyada iyo Mustaqbalka Gobolka Banaadir.
Dhanka kale Madaxweynaha Soomaaliya waxa ay ka dalbadeen in uu guud ahaan ka dhigo Dhulka Qaranka ee uu joojiyey Bixin iyo iibintiisa, halka uu ku ekeeyey Gobolka Banaadir oo Qura sida ay hadalka u dhigeen.
Waxa ayna sheegeen illaalinta Hantida Qaranka in ay waajib tahay, balse guud ahaan dalka ay taallo, laguna koobin kaliya Magaalada Muqdisho, waxa ay tilmaameen in ay Mas’uuliyad iska saaraan illaalinta Hantida qaranka, balse arrintaa awgeed aanan loo Carqaladeen.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayee sheegeen in aanan la gaarsiin Warqadda amarka ah ee Madaxweynaha kasoo baxay laguna joojiyo iibinta iyo bixinta dhulka danta guud ah, Odoyaasha ayaa ka digay in Markale la hakiyo Shirka Nabadeynta Gobolka Banaadir.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Shalay soo saaray Amaro uu ku sheegaye in aanan la iibin karin, lana bixin karin Dhulka Danta guud ah, laga soo bilaabo tan iyo markii uu noqday Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana dhanka kale jiro Warar soo baxaya oo sheegaya in ay suurto gal tahay in markale hakiyo Shirka looga arrinsanayo Nabadeynta Gobolka Banaadir.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo bilawgii bishaan ka hadlaye dib udhac ku yimid shirka ayaa kusoo koobay sababaha arrimo Farsamo, balse Maalin kadib Daladaha aanan Dowliga aheyn oo Muqdisho ku kulmay waxa ay Dowladda ku eedeeyeen in ay is hor istaagtay shirkaasi, iyagoona dalbaday in Caqabadaha ku hor gudban laga leexiyo.